Momba anay - CBD tranquil
Tranquil Farms dia mirehareha amin'ny maha mpamokatra ireo vokatra tokana CBD eny an-tsena ankatoavin'ny Food Alliance, fikambanana tsy mitady tombombarotra no nametraka ny fenitra amerikana ho an'ny fambolena maharitra mandritra ny roapolo taona.
Ny tantsaha dia manaraka ny torolàlana momba ny fambolena maharitra sy feno, manome antoka fa CBD dia avy amin'ny toeram-piompiana miaro ny tontolo iainana, mitahiry harena voajanahary ary tompon'andraikitra amin'ny fiarahamonina. Ity fanamarinana Food Alliance ity dia manondro fa ny toeram-pambolena, ala, na fizahantany fizahan-tany dia nohamarinina manoloana ny fenitra fanamarinana henjana izay mitaky dingana manan-danja mankany amin'ny faharetan'ny tontolo iainana, sosialy ary ekonomika maharitra.
Tsy mahagaga raha loharanom-pahasalamana ankafizin'ireo izay miahy ny vatany sy ny tontolony ny Tranquil CBD.
Ao amin'ny Tranquil CBD, mino izahay fa ny kalitao avo lenta, ny vokatra ara-pahasalamana azo avy amin'ny CBD azo avy amin'ny hemp dia manome fanafody voajanahary tsara indrindra hampisondrotra ny fahasalamana sy ny fahasalaman'ny mpanjifanay.
IZAY IHANY NO TSARA
Vokatra CBD tsy manam-paharoa dia novokarina avy amin'ny zavamaniry hemp tsara voaangona. Ny vokatray dia tsy GMO ary tsy misy fanafody famonoana bibikely, herisetra na zezika simika. Ny vokatray rehetra dia voasedra amn'ny laboratoara avy amin'ny antoko fahatelo ary ny solika dia azo antoka hohanina. Ka raha mitady ny vokatra CBD tsara indrindra eny an-tsena ianao dia aza mitady lavitra intsony. CBD mahitsy no valinao! Avelao hanatsara ny fiainanao ny vokatra avoakanay.
Ny iraka ataontsika dia ny hitondra ireo vokatra miorina amin'ny hemp cannabidiol (CBD) avo lenta eny an-tsena. Miasa izahay mba hampianarana ny hafa amin'ny tombotsoan'ny hemp extract, ary tanjonay ny hampiasa ny vokatra avo lenta izay tsara indrindra amin'ny indostria hanampy amin'ny fampitomboana ny fahasalaman'ny mpanjifanay.
CBD TRANQUIL & HEMP FARMS